Waxbarasho Archives - Daryeel Magazine
Fahan Furaha Luuqada Ingiriiska
Hormarka iyo hiigsiga dheer ee bini’aadamku ku hawlanyahay waxay Dariiqa u xaartay in dalabka iyo raadinta barashada luuqadaha kala duwan uu cirka isku shareero . Dad badani waxay ogaadeen in ay muhiim tahay ka bixitaanka xayndaabka ku hadalida hal luuqad si ay ula jaanqaadaan dunidaan horumartay. Luuqada Ingiriisku labadii qarni ee lasoo dhaafay waxay ahayd hogaanka dhamaan luuqadaha bulshooyinka dunidu …
Doorashada Takhasuska Waxbarasho
Ma doonaysaa inaad doorato takhasuska kugu haboon? Haddiiba aanad haynin kii aad kuugu haboonaa sided u dooran kartaa ku ku raali galiya? Maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad takhasuskaaga xulato adigoo maraya hab cilmiya oo nidaamsan. Doorashada maadada aad ku takasusayso amaba aad Jaamacad u galaysaa maaha mid fudud, laakiin ardayda Soomaaliyeed way la fududahay waayo waxaanay helin talo fiican oo …
Ma tahay arday? Haddii aad tahay arday ma rabtaa inaad noqoto arday hirgalay, oo guulaysta? Haddii aad “haa” ku jawaabto labadaa su’aaloodba, su’aal kale: “Sidee baad u noqon kartaa arday wanaagsan oo aflaxa?”. Su’aashaas ayuu maqaalkani isku dayayaa inuu ka jawaabo. Inaad guulaysato iyo inaad guul daraysataa waa wax ku xidhan inaad marka hore hadaf iyo doonis leedahay. Hadafka iyo …
Dayaxu wuxuu sameeyaa wareeg uu ku soo wareegayo dhulka , wuxuu maraa tub (orbit) u gaara oo wareegiisu dhanyahay 360-digrii , 360-kaas digrii markuu soo dhamaysto oo uu bar-billowgiisii kusoo laabto , wuxuu soo wareegay 27-cisho & 7-saacadood qiyaastii , oo noqonaysa (bil xiddigeed) , Habeenka koobaad ee u horaysa ee dayaxu soo baxo , xiddigta uu kasoo ag baxo …
The 15 Invaluable Laws of Growth (15 ka Xeer ee aan la qiimayn karayn ee Korriinka) by John Maxwell: Qof wal oo innaga mida noloshiisu heer ayay joogtaa, heer kalana haanka ayuu ku hayaa oo wuu hiigsanayaa. Halka uu joogo iyo meesha uu hiigsanayna, waxa u dhexeeya farqi (gap) aad u wayn. Si uu u gaadho, wuxu u baahan yahay in …
Qormadan waxaan ku faalayn doonaa sidii aad u noqon lahayd qofku fiican wax akhriska oo aan ka caajisin , kama hadlayo akhriska iyo muhiimaddiisa oo wax jirra maqaalo badan oo ay ka qoreen dad badan oo aqoonyahan ahi. Aadanuhu wuxu horumar ka gaadhaa aqoonta marka aanu ku koobnaan casharkii barrehiisu u dhigay ee uu yahay mid Raadsada wax walba oo …
Weydii Naftaada Ka Hor Intaadan Dooran Waxa Aad Doonayso Inaad Barato
Ka hor inta aadan u guda gelin waxa aad doonayso in aad barato, mustaqbalka soo socdana aad xirfad shaqo ka dhigato, waxa habboon in aad is waydiiso waydiimahan soo socda: 1. Awood ma u leedahay waxan aad doonayso inaad barato? Si kale haddaan u dhigo, ma yahay wax hibo laguu siiyay oo aad ku wanaagsan tahay? Eebbe qof kasta wax …
Ma Taqaanaa Xikmada ? Waxaan maqalnaa erayga xikmad laakiin waxa suurto gala hadii layna weydiiyo qeexitaankeeda in aynu ka bixino jawaabo kala nooca, balse waxaynaan ku kala feker duwaneyn in xikmadu tahay wax wanaagsan ama shey qaaliya oo ruux kastaaba u baahanyahay inu helo amaba uu yeesho, hadabo waxad mawduucan kaga bogan doontaa su,aalaha soo socda iyo jawaabohooda taasoo laga …
Ardayda Qalin Jabisay Ee Shaqo Doonka AH (QISO)
Qof kasta ha aqriyo Qisadan, gaar ahaan Ardayda Qalin jabisay ee Shaqo doonka ah Wiil dhalinyaro ah ayaa shaqo Maamule shirkad weyn ka codsaday. Wuxuu interview u soo hor fariistay Agaasimihi Guud oo CV-gisa ka ogaaday in natiijada waxbarashadiisi sareysay. Wuxuu weydiiyay in Aabihii Schoolka ka bixin jiray? Wuxuu ku jawaabay, Maya Hooyadey baa iga bixin jirtay. Agaasimihi ayaa weydiiyay, …
Ma ogtahay khaliifa Mucatassim Billaah wuxuu ahaa wiilkii 8aad uudhalay Haaruun rashiid ,sidoo kale wuxuu hayste 8 wiil iyo 8 gabdhood ,wuxuu xukunka haye 8 sano. Ma ogtahay Muruqqa ugu adag bina aadanka waa midka kujira daanka (afka). Ma ogtahay Ammiirkii uhorreeye islaamka wuxuu ahaa c/laahi ibnu jaxash. Ma ogtahay biyaha lakarkariyo kadib labarafeeyo in ay yeeshaan midab dhalaal zaaid …
Marka hore Waxaa Mahad iskaleh Eebaha Ina Baray Qalinka iyo sida waxloo qoro Marlabaad. MAQAAL tayo lihi waa qoraal kooban, qaniya, kaasoo xamnaarsan akhristuhuna kadhex helikaro xog balaadhan oo tiro iyo tayaba leh, taas oo qoraagu kasoo dheegay ilo cilmiyeed badan oo kala duwan. Islamarkaana qoraagu si hufan, habaysan oo hormaysan ugu dhex muujiyay qoraalkiisa. Waa qoraal xogtiisu u adeegayso …
Bismilaah mahad oo dhan alle ayaa iska leh waxaan salaamaya dhaaman umadda soomaliyeed meel kastay joogan marka xigta waxan sigaar ahaaned usalaamaya intii magacayga iyo muuqayga garanaysa. Maqaal kan waxeynu ku milicsan doona qeybaha loo qeybiyo wax barashada, xidhiidh ka kadhexeeya aqoonta iyo xikmada ,sidoo kale, waxeynu ku eegi doona faa,idada akhris ku u leeyahay aqoon raadiyaha. Aqoonta markaad maqasho …
Becoming a young adult can be stressful enough but when you are considering continuing your studies at university there may be even more issues to deal with. Here are a few pointers that may help you to keep on track and move in a direction towards a positive future. START WITH A POSITIVE FRAME OF MIND – Remind yourself why …
Akhrisku waxa uu kamid yahay afarta xirfad barasho ee waawayn, waana midka ugu muhiimsan ee aqoontu kasoo maaxato. Qormadan kooban waxaan diirada ku saari doonaa in aan wax ka iftiimiyo sida umaddaha aduunku ugu kala duwanyihiin akhriska, faa’iidada akhrisku u leeyahay shaqsiga iyo bulshada iyo inagu bulsho ahaan heerka aynu ka joogno akhriska. Ugu horayn hadaan milicsano ummadaha kala gadisan ee caalamkan kuwada …